AMAFU: Lapho kugeleza khona amandla, umphefumulo uyaphulukisa
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Pablo
Lena akuyona indlu emoyeni, kuba chalet emafini akhiwe ethafeni elikhulu nombono okungapheli. Amandla endlu amnandi, ashiya eyodwa ishajwe futhi ivuselelwe. Sicela usisize siyilondoloze futhi sifake ingqikithi yakho encane namandla amahle kuyo. Kuwukunethezeka okusha lapho uchitha khona isikhathi nawe, umndeni wakho nemvelo.
Siyathanda ukunikeza izivakashi ngokuhlinzeka ngamaqanda aphilayo kanye nemifino. Akukhona ukuthenga, uma kukhona, siyajabula ukwabelana ngaphandle kwezindleko ezengeziwe.
Konke okwezivakashi... kunomhlaba ongamahektha angu-5 futhi utholakala phakathi kwemithombo yawo yamanzi engu-2, amanzi ayimvelo eyi-100% futhi angathathwa kukhiye. Yingakho kanye neplanethi siphakamisa ukuyinakekela. Ungakhempa, uqwale futhi ujabulele ukubuka okungu-360.
Inengadi ephilayo kanye nezinkukhu ezijabule. Le ndawo ikhethekile futhi ihlukile kulabo abanquma ukuyijabulela nabangane babo. Isevisi imahhala ngokuphelele uma uzizwa unakekelwa kahle, ithiphu ingeyokuzithandela!
Ipulazi liyimizuzu eyi-10 ukusuka eklabhu i-llano grande, imizuzu eyi-12 ukusuka e-carulla del mall llano grande. Kuyipulazi elizimele imizuzu eyi-15 ukusuka esikhumulweni sezindiza iJosé María Córdoba.
Endaweni lapho benza khona amakheli ezitolo ezinkulu, siphakamisa i-Panorama Market. Ucingo: 5371921.
Yebo, ngemiyalezo evela emsamo... uma usuqashiwe ngizokunikeza inombolo yami kaWhatsApp nomakhalekhukhwini kanye nenombolo yocingo yomuntu oyotholakala ngaso sonke isikhathi ukuze ukuhlala kwakho kube ngcono.
Inombolo yepholisi: 84923